Noho ny fangatahan'ny MBS tamin'ny filan-kevitry ny tanàna ny taona 2016, dia nivory indray ny filan-kevitry ny tanànan'Antananarivo ny 09-11 marsa 2016, natrehan'ireo mpanolotsaina 54 amin'ny 54 mandrafitra ny filan-kevitra, fa tsy misy fanapahana mandrava ilay fifanarahana efa natao ny taona 2000. Io dia noraisina ny 11 marsa 2016.
Votoatin'ny fifanarahana nosiniavina ny 08 aogositra 2000:
- Ny Kaominina tompon'ny tany ANDROROSY, titre n° 1197-A dia manaiky hampanofa ny tany tsy misy ininona eo amboniny (terrain nu) mirefy 2500m² etsy Anosipatrana, amin'ny Malagasy Broadcast Systèm (MBS), hananganana trano hanaovana studio radio sy télévizionina.
Didian'ny fifanarahana fa tsy maintsy vita ao anatin'ny roa (02) taona ny trano, araka ny planina sy ny teti-bola izay hifanarahana amin'ny Tanànan'Antananarivo, izay ampiarahana amin'ny fifanaraham-panofana tany maharitra.
- Faharetan'ny fifanarahana:
50 taona, azo avaozina enim-bolana (06) mialoha ny fahataperan'ny fifanarahana teo aloha.
- Hofan-tany tsy misy ininona, tsy maintsy ananganana trano:
4000fmg/m², izany hoe 10 000 000fmg isan-taona, aloa eo ampiandohan'ny taona. Tsy adino fa ny taona 2000, dia 1 200 000fmg nahazo 404 bâchée iray bonne occasion, ary 60 000fmg nahavita solika fiara mandeha Tana - Mahajanga.
Tsy maintsy manangana trano ny MBS, izay vitany ny nanao izany, nanangana trano lehibe 3 izy, izay nisy nandoro tamin'ny krizy 2009 moa izany, ary ankehitriny, efa voaharina ny ankamaroan'ireo trano nirehitra ireo, indrindra ilay hanaovana studio radio sy télé.
- Fandravana sy fampihantonana fifanarahana:
Mirava ny fifanarahana raha tsy vita ny trano eo ambonin'ilay tany.
Mijanona ho an'ny tompon'ny tany ny trano sy ny zavatra rehetra eo amboniny raha rava na tapitra ny fifanarahana.
Rava ny fifanarahana raha hanaovana zavatra hafa na ampanofaina amin'ny olon-kafa ny toerana.
Tsy maintsy misy fiantohana na assurance ny trano sy ny toerana, ary mandoa ny hetra sy ny jirama mifanaraka amin'izany.
Tsy maintsy kojakojaina ny toerana sy ny trano.
Isaky ny 10 taona, dia azo akarina ny redevance na ny hofan-toerana, ka tsy mihoatra ny 15% izany.
Ny tsy fandoavana ny redevance, na ny hofan-toerana, na ny tsy fanataterahana ny votoatin'ny fifanarahana dia mandrava ny fifanarahana, izay misy fampitandremana roa (02) volana mialoha, commandement de payer na sommation d’exécuter, ka raha tsy misy tohiny ny fampitandremana dia manafoana ny fifanarahana avy hatrany, tsy ilana didim-pitsarana.
Miantona ny fifanarahana raha misy fahasimbana goavana amin'ny toerana nefa tsy niankina tamin'ny mpanofa ahafahany manao ny asany.
- Fandoavana ny lany rehetra
Ny mpanofa no miantoka manontolo ny vola lany rehetra amin'izao fifanarahana izao.
- Fandravana fifanarahana avy amin'ny Kaominina:
Ny 30 jolay 2020 anefa, tsy nisy fanapahana avy amin'ny mpanolo-tsainan'ny tanàna, na filazana fampitandremana, roa (02) volana, mialoha mikasika ny tsy fanajana ireo fepetra voarakitra ao amin'ny fifanarahana, dia nandefa taratasy tamin'ny Malagasy Broadcast Systèm (MBS) ny Ben'ny tanàna fa "Au motif de reprise pour usage personnel", na ny filany hampiasa manokana ny toerana, dia ravany ny fifanaraham-panofana ny tany etsy Anosipatrana, ka manome fe-potoana enina (06) volana izy hialana amin'ny toerana, ka amin'izany no hijerena miaraka ny toerana, état des lieux sy ny fanombanana ny fifanarahana natao.
Eto izany, dia mifanipaka tanteraka amin'ny fifanarahana ny fanapahan-kevitra noraisina, satria ny Ben'ny tanàna tsy naka ny fanapahana avy tamin'ny Filan-kevitry ny tanàna, izay indroa miantoana namoaka fanapahana ampanofa ny ampahan-tany.
Raha ny angom-baovao, dia nilaza ho tsy nahatapaka ny fitsarana, nefa nilaza ihany koa fa tsy manana ny rariny ny MBS nitondra ity raharaha ity teo anivon'ny fitsarana.
Andrasana izany ny fivoaran'ny raharaha.